Na-efe efe drones ịchụ nta ndị njem n'ụsọ osimiri Italiantali na-agbasa COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Na-efe efe drones ịchụ nta ndị njem n'ụsọ osimiri Italiantali na-agbasa COVID-19
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mgbe drone na-achọpụta onye nwere ahụ ọkụ, ọ na-amata ha wee mee ka ndị otu na-ahụ maka ahụike mara, wee rute saịtị ahụ maka nyocha, nke nwere ike ibute ule COVID-19.
Ndị ọrụ ahụike Rome ga -ebuga drones na -efe efe n'ụsọ osimiri Rome.
Ndị na -efe efe na -anya ụgbọelu iji hụ ebe okpomọkụ ndị na -anọ n'akụkụ osimiri nọ na Italy.
A ga-eji drones soro COVID-19 ma gbochie ihe mberede ahụike.
Ndị ọrụ ahụike mpaghara na Rome, Italytali na-ebuga ụgbọ elu ka ọ na-efegharị n'akụkụ osimiri Ostia dị nso na Rome, wee nyochaa ọnọdụ okpomọkụ nke ndị niile na-aga n'akụkụ osimiri, iji chọpụta ndị nwere ike ibute ọrịa COVID-19.
E mere atụmatụ 'drone' ọgwụ ahụ ka ọ na -agagharị n'ụsọ osimiri Ostia, nke dịpụrụ adịpụ na Rome, na ngwụcha izu a, mana nnwale ahụ gbuturu n'ihi amụma ihu igwe na -adịghị mma maka Satọde na Sọnde a.
Dabere na Italian Ndị ọrụ ahụike, drone “ga -akpaghị aka” tụọ okpomọkụ ka ọ na -efefe ma ọ dịkarịa ala 25m n'elu mmiri ma nọrọ ma ọ dịkarịa ala 30m n'ebe ndị mmadụ nọ. Emebere ụgbọ elu nnwale ka ọ were awa ise, n'etiti elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke abalị.
Ndị ọrụ ahụ kwuru, "Mgbe drone ahụla onye nwere ahụ ọkụ, ọ na -amata ha wee mee ka ndị otu na -ahụ maka ahụike mara." "Ndị dọkịta wee rute saịtị ahụ maka nyocha, nke nwere ike ibute ule COVID-19."
Ndị ọrụ gọọmentị kwere nkwa ịkwanyere nzuzo, na -ekwu na a gaghị amata ndị na -eme ezumike nwere oke okpomọkụ.
Marta Branca, onye isi ASL ndị Rom 3, ikike ahụike ọha nke na -ekpuchi ọtụtụ mpaghara nke isi obodo Italy, gọnarịrị asịrị na a ga -eji ngwaọrụ na -efe efe ịchụ nta ndị na -agbasa ọrịa ahụ.
"Ọ bụ naanị ụzọ iji jide n'aka na achọpụtara ọrịa ma ọ bụ ihe mberede n'ụsọ osimiri ma ọ bụ n'oké osimiri ozugbo na ọ nweghị otu oge furu efu na ọrụ nnapụta," Branca tweeted. “Nna m nwụrụ otú ahụ. Ma eleghị anya, ya na drone ahụ, ọ ka ga -anọ ebe a. ”
N'otu oge ahụ, Branca kwetara na ọgbaghara ụfọdụ dị na nkwukọrịta gbasara atụmatụ ahụ, na -ekwe nkwa izere nghọtahie n'ọdịnihu.